Mac အတွက် OneNote အတွက် template ကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ။ - Onenote
အဓိက > Onenote > Onenote templates mac - ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ
Onenote templates mac - ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ
Mac အတွက် OneNote အတွက် template ကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ။
Mac အတွက် OneNote တွင်တင်းပလိတ်များကိုဖန်တီးပါ
ဟုတ်တယ်၊တည်ဆောက်သည်သင်တစ်ဦးအဘို့အသုံးပြုချင်တဲ့မှတ်စုtemplate ကို။ the Right-clickစာမျက်နှာSet as Default ကိုရွေးချယ်ပါTemplate။ တစ်ဦးကပေးတဲ့ dialog box ကိုအတည်ပြုခြင်းအဘို့အပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဇူလိုင် ၉ 2019
သင်ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာကသင်ဒီမှာအခြေခံအားဖြင့်သင်ဒီမှာကလစ်နှိပ်ပြီးနာမည်ပေးပြီးမှတ်စုစာအုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ကိုယ်ပိုင်စီစဉ်သူလုပ်ဖို့ပါ၊ ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့စီစဉ်သူဆီကိုသွားပြီးတော့ကျွန်မမှာအပိုင်းတစ်ခုရှိပြီးဒီပုံစံကိုခေါ်ပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့! နှင့်ပထမစာရွက်နေ့စဉ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်လိုချင်လျှင်သင်၏စီမံကိန်းရေးဆွဲသူ၏အရောင်ကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ငါသာယခုအဘို့ဤအရောင်သုံးပါလိမ့်မယ်။ ငါဇယားကွက်ကိုရေးဖို့အကြံပြုလိုတယ်၊ အခြေခံအားဖြင့်သင့်ကိုလမ်းပြပေးတယ်၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဘဝတာ ၀ န်တွေ၊ ကျောင်းတာ ၀ န်တွေ၊ အလုပ်တာဝန်တွေစတဲ့အရိုးရှင်းဆုံးသေတ္တာတွေနဲ့စမယ်။
ဤအရာသည်သင်ကျောင်း၊ အလုပ်နှင့်ဘဝရှိသည့်အခါအရေးကြီးဆုံးသောအရာသုံးခုသာဖြစ်သည်။ သင်သာအလုပ်ကိုသွားပြီးသင်လုပ်သောအလုပ်နှင့်သင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်ဆိုလျှင်သင်လုပ်ချင်သောအရာကိုလုပ်နိုင်လျှင်ထိုအရာသုံးခုစလုံးကိုသင်လုပ်နိုင်သည်။ ငါသာသင့်ကိုအခြေခံလမ်းညွှန်ပေးသည်ဒါကြောင့်ငါနှစ်ခုသာပြုလိမ့်မည်။ ပုံဆွဲခြင်းဖြင့်စတင်ပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်၌ရှိသောကျွန်ုပ်၏ဘောပင်အရဤကလောင်သည်သင်နှိပ်မိသောနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ပုံစံသို့သွားပါမည်။ ဤပုံသဏ္withာန်နှင့်ဤတွင်စတင်ပါမည်။ ။ ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိသောကြောင့်သင်ဤအရာကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်၊ သင်ပြုလုပ်သမျှသည်ဤနေရာတွင် နှိပ်၍ သင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ငါလိုင်းများကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်လည်းဒီအနည်းငယ်ပိုကြီးစေလိမ့်မယ်။ ယခုသင်ဒီမှာဘေးဘက်ကို နှိပ်၍ အကွက်၏အမည်ကိုရေးပါ။ ငါအမြတ်ထုတ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောအဖြူရောင်စာလုံးနှင့်စာသားဖြည့်စွက်ရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ဤအရာကိုလုပ်လိုလျှင်ကျွန်ုပ်လည်းနေရာများဖန်တီးရန်အကြံပေးလိုသည်၊ အစားမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်မယ်လို့ပိုကောင်း set ကိုအရွယ်အစား 18 တစ်သေတ္တာလိုပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်ကဲ့, ထိုကောင်းသောအကြည့်ပြီးတော့သင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါသည်ဤဝတ်မယ်လို့လည်း font ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဟုတ်ပြီ၊ မင်းဒီမှာလုပ်ရုံပဲ။ အခုသိပ်ကောင်းပြီအခုငါတို့မျဉ်းကြောင်းတွေလုပ်တော့မယ်။ ဒါကြောင့် drawshapes line ကိုသွားမယ်။ ပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်စရာမလိုဘူး။ သင်အနည်းငယ်ချဲ့နိုင်ပြီးဒီနေရာကိုပြောင်းလိုက်ပါ။ ဤအစီအစဉ်ရေးဆွဲသူကိုကူးယူခြင်း၊ ကူးယူခြင်းနှင့်ကူးထည့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအခါသင်၏မိတ်ဆွေဖြစ်သည့်အတွက်ယခုကျွန်ုပ်သည်သင်ဖန်တီးရန်ထက်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်များစွာပိုသက်သာစေသည်။ ဒီအတိအကျလေးထောင့်ကွက်ကကော်ပီကူးရုံသာကူးပါလိမ့်မယ်။
ငါဒါကိုလျှော့ချလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါလုပ်ရတာလွယ်မယ်။ ကော်ပီကူးတယ်၊ ကူးထည့်လိုက်မယ်။ ဒီမှာအကွက်အတိအကျရှိတယ်၊ ပြီးတော့နာမည်ရဲ့နာမည်ကိုပြောင်းလိုက်မယ်၊ ဒါကြောင့်အလုပ်တွေကိုတည်းဖြတ်မယ်။ နည်းနည်းမညီမညာဖြစ်နေတယ် ကောင်းပြီ၊ ယခုကြှနျုပျတို့ဤအကွက်များကိုဖန်တီးပြီးပြန်စီပါလိမ့်မည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအကွက်နှင့်တူသောအကွက်တစ်ခုကိုဖန်တီးတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ယနေ့၏ထိပ်တန်း ဦး စားပေး ၃ ခုဖြစ်တော့မည်။
နောက်လုပ်မယ့် box က time block box ပါ။ ဒါဆိုထည့်ပါ။ ဒီစားပွဲကိုဒီမှာသုံးမှာပါ။ ည ၅း၁၂ မှ ၁၂ နာရီကိုသွားမှာပါ။ ကျနော်တို့လုပ်ဖို့တာပေါ့လာမယ့်အရာနံနက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်အမှန်တကယ်ပိုပြီးရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင် - သင်ကတာဝန်ကျရေးသားဖို့အခန်းတစ်ခန်းရှိတယ်ဒါရုံယခုကျွန်တော့်သေတ္တာကိုလုပ်တာပေါ့, တစ်နည်းနည်းပိုပြီးဒီဧရိယာထုတ်ရှင်းလင်းလိမ့်မည်ဟုငါဒါ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့်ညဥ့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် boxes တွေကိုသင်တစ်ဦးတသမတ်တည်း check box ကိုရှိသည်ဖို့ချင်သောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မဆိုအမျိုးအစားရှိပါက, သင်တို့ကိုအခြေခံအားဖြင့်ယခုကျွန်ုပ်တို့ရုံအတူတူအားလုံးပုံးထားသောနေ့ရက်ကာလကိုစာရွက်နှင့်အတူပြုသောအမှုဖွင့်သော scoreboard များအတွက်အသုံးပွုနိုငျ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ။ သူတို့ကြည့်ရတာကောင်းပါတယ်။ ကွက်လပ်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်၎င်းတို့အားလုံခြုံမှုရှိအောင်သေချာအောင်လုပ်ရန်၊ အရာအားလုံးနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်လုပ်ရန်၊ ဓာတ်ပုံများ (သို့) မည်သည့်အလှဆင်မှုမျိုးကိုမဆိုကွက်ကွက်များကိုဖြည့်စွက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဥပမာ - ဒီမှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်စာရွက်ကိုဖန်တီးပြီးအပတ်စဉ်စာရွက်ကိုတော်တော်လေးဒီဇိုင်းလုပ်ဖို့အတိအကျအတူတူပါပဲ။ သင်လုပ်သမျှအားလုံးသည်၎င်းတို့ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်အောင် copy လုပ်ပြီး paste လုပ်ပါ။
ဒါကသင်ကဒီလစဉ်အနှစ်ချုပ်ကိုဘယ်လိုပြရမလဲဆိုတာကိုပြသတဲ့နေရာမှာသင်ကော်ပီကူးယူကူးယူနိုင်ပြီးအဲဒီစက်ဝိုင်းများထဲကပုံများထည့်ရုံသာမကဒီနေရာမှာခုနစ်အကွက်ပေါင်းခြောက်ကွက်လေးထောင့်လေးတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့ဘုတ်ပြားအမျိုးအစားတစ်ခုပါပဲ။ ငါလုပ်ခဲ့တဲ့စာရွက်တွေအားလုံးကိုလုပ်ပြီးတာနဲ့ဒီမှာလတိုင်းအတွက်ငါကဏ္sectionsတွေလုပ်မယ်၊ မှတ်စုရေးတဲ့နေရာကိုမှတ်စုနေရာမှာထည့်နိုင်တယ်။
သင်ယခုယူသွားမည်။ ထို့နောက်သင်သည်သူတို့၏အရောင်များကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင်လအသစ်တစ်ခုကိုစတင်လိုပါကဤနေရာတွင်ဤစာရွက်များကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းကိုကူးယူပြီးကူးထည့်ပါ။ ထို့နောက်နေ့စာရွက်နှင့်ဘာလုပ်ရမည်ကိုငါသာပေးသည်။ တနင်္ဂနွေတစ်ရက်စီကြားမှာငါအပတ်စဉ်စာရွက်တစ်ခုထပ်ထည့်တယ်။ ယခုတွင်သင်သည် Microsoft OneNote နှင့်ရိုးရှင်းသောအစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်မည်သို့အခြေခံရမည်ကိုသင်သိပြီဖြစ်သော်လည်းသင်လုပ်လျှင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ငါစီစဉ်သူကိုဖန်တီးရန်အချိန်မရှိဘူး။ ကျွန်ုပ်လုပ်ရန်စီစဉ်ထားသည့်ပုံစံများကိုအောက်ဖော်ပြပါအကွက်တွင်ကျွန်ုပ်အခမဲ့စီစဉ်ပေးသည်။ ၎င်းတို့ကိုသင်၏မှတ်စုစာအုပ်ထဲသို့ကူးယူပြီးပါကသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောမှတ်ချက်သို့ပြောင်းနိုင်သည်။ မင်းရဲ့ရက်စွဲကိုရှာသလား။ နံနက်ခင်းဒါမှမဟုတ်ညနေခင်း၌ဤဆောင်းပါးသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ခလုတ်ကိုသင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေမည်လား၊ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းရှိ၊ မရှိကိုမကြာခဏ ~ ciao ~ :)
OneNoteအများအပြား built-in စာမျက်နှာနှင့်အတူကြွလာတင်းပလိတ်များအလှဆင်စာမျက်နှာနောက်ခံများ၊ စီစဉ်သူများနှင့်လုပ်ရန်စာရင်းများပါ ၀ င်သည်။ သင်လိုချင်လျှင်သင့်ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာကိုလည်းဖန်တီးနိုင်သည်template ကိုသို့မဟုတ်ရှိပြီးသားတစ်ခုစိတ်ကြိုက်။ ... အဲဒါကြောင့်OneNote တင်းပလိတ်များမှတ်စုများမပါ ၀ င်သောစာမျက်နှာအသစ်များအတွက်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဤလ၏ Ehlert & Associates နည်းပညာသင်တန်းအစတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် OneNote တွင်စိတ်ကြိုက်စာမျက်နှာ template တစ်ခုဖန်တီးရန်သွားကြည့်မည်။ ကောင်းပြီ၊ ဒါဆိုငါ OneNotenotebook ကိုဖွင့်လိုက်တယ်၊ ဒီမှတ်စုစာအုပ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုမီးမောင်းထိုးပြချင်တယ်။ အဲဒါဟာတစ်ခုတည်းသောစာသင်ခန်းမှတ်စုစာအုပ်တစ်ခုပါ။ ငါအစီအစဉ်တစ်ခုစီအတွက် Excel အတွက်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်အပိုင်းတစ်ခုတွင် Word အတွက်ကဏ္ by တစ်ခုလုပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်စတင်ခဲ့သည့်အရာများအတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုစီရှိသည်။ PowerPoint အတွက်နှင့်ယခုငါ Excel အပိုင်းရှိစာမျက်နှာများသည်လူတန်းစားတစ်ခုစီအတွက်ဖြစ်သည်။ မှတ်ချက် - ကျွန်ုပ်သည် class file attachments ပါသော container မရှိပါ။ ကျွန်မအတန်းနှင့် ပတ်သက်. ပိုကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းကနေအချက်အလက်များ၏မျက်နှာပြင်ပုံရှိသည်နှင့်ငါမဆိုသင်ခန်းစာမှတ်စုများအားမှတ်စုရှိသည်နှင့်သင်လာမည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်ဖော်မြူလာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဆိုသူတို့ကအတူတူပင်အတိအကျကိုဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်နှင့်ငါတို့သည်အ Paste ကိုတချို့ကပို Excel ကိုအတန်းရှိဒါ နောက်ပြီး Word အပိုင်းကိုပြန်သွားတယ်။ ပထမဆုံးစာလုံးအတွက်စာလုံးကြီးကြီးကစာရွက်စာတမ်းတွေထဲကအချက်အလက်တွေကိုဖန်သားပြင်မှာချထားတဲ့ဖိုင်တွေလိုမျိုးသင်ကြားရေးမှတ်စုတွေ၊ PowerPoint တို့မှာတူညီတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရှိတယ်။ တူညီတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအတိအကျဆိုပါစို့။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုရှိပြီးသားဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ဒီကဏ္sectionsများကိုစာမျက်နှာများကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်လွယ်ကူစေရန်စာမျက်နှာ template တစ်ခု၏စိတ်ကူးကိုကြည့်ကြစို့။ တစ်ချိန်ချိန်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။ အရမ်းလွတ်လပ်မှုရှိရင်မှတ်စုတွေကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုလွှင့်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီမှာစိတ်ကူးကငါကငါပဲ၊ စာမျက်နှာတိုင်းကိုစံဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရှိစေချင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာတင်းပလိတ်ကိုမဖန်တီးခင်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကသူတို့ကိုထည့်သွင်းထားတယ်။ မိုင် ght, ဒါတွေကိုစမ်းကြည့်ချင်တယ်၊ မင်းရဲ့မှတ်စုစာအုပ်တွေဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာပေါ်မူတည်တယ်။ မင်းလိုချင်တာကိုမင်းဒါကိုလုပ်စရာတောင်မလိုချင်ဘူး၊ ဒါဆိုငါနင့်ကိုငါထပ်ခါထပ်ခါငါစာမျက်နှာအသစ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးလျှင်၎င်း၏ညာဘက်ရှိအနက်ရောင်မြှားလေးကိုနှိပ်ပြီးစာမျက်နှာတင်းပလိတ်များကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်ဒီမှာ Microsoft မှပေးထားသောအမျိုးအစားအချို့ရှိသည်။
သင်တို့အတွက်ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားကိုသာနှိပ်ပါ။ အများအားဖြင့်စီမံကိန်းများသို့မဟုတ်အဓိပ္ပါယ်များနှင့်ဆက်နွှယ်သောစာမျက်နှာတင်းပလိတ်များရှိသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်စီမံကိန်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်စာမျက်နှာရှိလိုပါက၎င်းကိုနှိပ်ရုံဖြင့်စာမျက်နှာ template ကိုထည့်သွင်းထားကြောင်းတွေ့နိုင်သည်။ ဤအရာသည်စာမျက်နှာ template တစ်ခု၏စိတ်ကူးဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်မှတ်စုသို့မဟုတ်မှတ်စုများရှိပြီးသားမှတ်စုများရှိသည်။ အချို့သောနောက်ခံပုံများနှင့်တူသည်။ ဒါကိုသင်တကယ်မြင်နိူင်သည်။ အကြံဥာဏ်တစ်ခုသာငါစီမံကိန်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်စာမျက်နှာကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ၊ ဒါပေမယ့်လင်းနို့ပေါ်ကနေဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုရှိတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ စီမံကိန်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကငါ့အတန်းအစားမှတ်စုစာအုပ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး၊ ဒါကငါ့အတွက်အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါ Planner အမျိုးအစားကိုသွားတဲ့တခြားသူတွေကိုငါစမ်းကြည့်လို့ရတယ်။ ဒီစာမျက်နှာကိုထုတ်ပြီးအခြားအမည်တစ်ခုမပေးမချင်းသူသည်ဤစာမျက်နှာကိုသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ထိုအရာကိုကျွန်တော်သိမ်းဆည်းထားလိုသည်။ သို့သော်သင်ကမည်သည့်အရာကိုမဆိုမထားလိုသည်ကိုသင်သိသည်။ ငါ့ကိုထည့်သွင်းရန် check box များပေးသောစာရင်းလုပ်ပါ၊ ၎င်းသည်နောက်ခံအရောင်ရှိသော်လည်းနောက်တဖန်ဤမှတ်စုစာအုပ်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤစာမျက်နှာကို right click နှိပ်၍ ၎င်းကိုဖျက်ပစ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်လိုသောအရာ ခဏများအတွက် template ကိုပြတင်းပေါက်ပိတ်ဖို့သွားယခုအခါငါ့အဘို့သင့်လျော်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ template ကိုဤစာမကျြနှာတစျခုကိုကယ်တင်ဒါပေမယ့်ပိုပြီးယေဘုယျစေရန်ဖြစ်ပါသည်ဈဇစာမျက်နှာ template ကိုအခါတိုင်းငါကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်အတိအကျဘယ်လိုကြည့်ဖို့စာမျက်နှာဒီဇိုင်းပါလိမ့်မယ် မကြာသေးမီကမှတ်စုများကိုမထည့်ပါနှင့်။ ဤစာမျက်နှာကိုကျွန်ုပ်ပုံစံနှင့်ပုံစံများဖြင့်အသုံးပြုမည်။
ယခုငါဒီစာမျက်နှာကိုသိမ်းချင်တယ်၊ ဒါကလက်ရှိအတန်းအစားအတွက်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါကော်ပီလုပ်မယ်၊ ငါအဲဒီစာမျက်နှာကို right click နှိပ်ပြီး Move or Copy ကိုရွေးပြီး၎င်းကိုတူညီသောအပိုင်းသို့မဟုတ်ကော်ပီသို့တည့်တည့်ပြောင်းမည်။ ငါ Excel အပိုင်းတစ်ခုကူးမယ်။ ဒါဆိုအခုကော်ပီအတိအကျရပြီ။ ဒါပေမယ့်ဒါကငါ template တစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်လိုက်မယ်။ ဒါကြောင့်ခေါင်းစဉ်ကိုအရင်ရွေးပြီးအဲဒါကိုပဲ အရမ်းရှင်းပါတယ်၊ ဒါကဒီဖန်သားပြင်ကိုငါပယ်ဖျက်မယ်။ ဒါက Screenshot တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာမှတ်စုတစ်ခုထပ်ထည့်မယ်။ စာသားစာရွက်စာတမ်းကနေအထွေထွေအချက်အလက်တွေနဲ့စာသားမျက်နှာပြင်တစ်ခုထပ်ထည့်လိမ့်မယ်။ အတန်းအစားမှတ်စုအတွက်အစားထိုးနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ပြောသည့်အရာနှင့်အစားထိုးပါ။ ကိုယ့်အတန်းအစားဖိုင်များကိုဤနေရာတွင်ထိုကျည်ဆံအမှတ်ကောက်များနှင့်အဆင်ပြေသက်ဆိုင်ရာအတန်းအစားမှတ်စု add ဆိုသညျကားနှင့်သွားတာပါ။ ငါသာအမှန်တကယ်ပူးတွဲဖိုင်များကိုတစ်ခုချင်းစီကိုပယ်ဖျက်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်မှတ်စုထဲမှာထားပါဒါကြောင့်ဒီတူညီတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူအပိုစာမျက်နှာများဖန်တီးကူညီရန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ template ကိုဖြစ်လိမ့်မည်ဒါကြောင့်ယခုငါငါဒီဇိုင်းငါ template ကိုအဖြစ်အသုံးပြုလိမ့်မည် ဒါကြောင့်သိမ်းဆည်းထားပါရွေးထားသည့်အခါကျွန်ုပ်စာမျက်နှာအသစ်သို့သွားပြီးအနက်ရောင်မြှားကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဤအချိန်သည်အောက်ခြေနားနီးတွင်ရှိနေသော်လည်းစာမျက်နှာရှိတင်းပလိတ်များကိုသွားပါ၊ ထိုတွင်သင်သိသည်မဟုတ်လျှင်သတိမပြုမိဘဲလက်ရှိစာမျက်နှာကိုသိမ်းပါ ကျွန်ုပ်လက်ရှိကြည့်နေသည့်စာမျက်နှာကို template တစ်ခုအနေဖြင့်သိမ်းဆည်းရန်အတွက်၎င်းကို နှိပ်၍ ၎င်းကိုအမည်အတန်းအစားစာမျက်နှာကို ပေး၍ စာမျက်နှာအသစ်များအတွက်ပုံသေတင်းပလိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်မည်။ လက်ရှိအပိုင်း၌တည်၏။
ယခုငါလုပ်ရန်မလိုတော့ပါ၊ ဖြစ်ပျက်တော့မည်မှာကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်တင်းပလိတ်များအတွက်အမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုရပြီး၎င်းကိုငါရွေးချယ်မည့်အချိန်မရွေးရွေးချယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ငါ Microsoft မှပုံစံများနှင့်အတိအကျပြုလုပ်သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ငါစာမျက်နှာအသစ်တစ်ခုကိုနှိပ်သောအခါ၊ စာမျက်နှာအသစ်တစ်ခုကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပေးသောအမှန်တကယ်စာမျက်နှာအသစ်၏ခလုတ်၏မြှားမဟုတ်ဘဲလုပ်သည်။ ၎င်းသည်ဤအပိုင်းအတွက်ဤပုံစံအတွက်အစားထိုးကဏ္ shown အတွက်ကျွန်ုပ်အစားပြသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုငါ လုပ်၍ သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ယခု 'select default template class page' အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာယခုဤကဏ္ for အတွက်သာဖြစ်သည်၊ ယခုအခြားကဏ္classesများအတွက်လည်းလုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်၏ template သည်သတိပြုပါ၊ ထို့ကြောင့်ငါ word section သို့သွားပြီးဒီမှာလာမည် သတိပြုရန်မှာဤကဏ္ for အတွက်ပုံမှန်ပုံစံမရှိဟုဆိုသောကြောင့်စာမျက်နှာအသစ်တစ်ခုကိုနှိပ်ပါကရရှိသောစာမျက်နှာအလွတ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ငါလာပြီး class စာမျက်နှာကိုရွေးသည်။ စကားမစပ်၊ ၎င်းတို့ကိုသူတို့ပေါ်လာသည့်အမျိုးအစားအလိုက်စီ ထား၍၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်တင်းပလိတ်ကိုသိမ်းပြီးရုံကထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနေသောကြောင့် 'My Templates' အမျိုးအစားယခုတည်ရှိကြောင်းသတိပြုပါ။ ဤရွေ့ကား, ငါသည်သူတို့ကဤအမျိုးအစားထဲမှာပေါ်လာမိန့်၌ဤအထဲကထောက်ပြပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကိုရှာဖွေအနည်းငယ်လှည်ဖြစ်နိုင်သည့်, အက္ခရာစဉ်ခွဲထားခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ငါဖန်ဆင်းအနည်းဆုံးမြားမှာဖြစ်ကြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိပ်အနီးလူတန်းစားစာမျက်နှာရှိကြသည်မဟုတ် စာရင်း၏ထိပ်ဆုံး, ငါ PowerPoint များအတွက်အလားတူလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
ငါဤအပိုင်းအတွက်အတိပြီးသောပုံစံကိုအတန်းစာမျက်နှာအဖြစ်လာပြီးယခုအချိန်ပိုပရိုဂရမ်အပိုင်းများကိုထပ်ထည့်ပါကကျွန်ုပ်သည်ထပ်တူအစီအစဉ်အတိုင်းထပ်တူပြုလိမ့်မည်။ ငါ Excel သို့ပြန်သွားပြီ။ ယခုသင်ယခုသိသောစာမျက်နှာကိုငါထပ်ထည့်လိုက်ပြီ။ ကူးယူပြီးပါပြီကျွန်ုပ် ဆက်လက်၍ မသွားလိုတော့ပါ။ ညာဘက်ကိုနှိပ်ပြီးယခုဖျက်လိုက်ပါ။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်အစသို့ပြန်သွားပါမည်။ လက်ရှိမှတ်စုများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ကျွန်ုပ်၏ပထမစာမျက်နှာဖြစ်သည်။ ဒီနေရာတွင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်ဖော်မြူလာဖြစ်ကြသည်။
အခုငါ class ကိုထည့်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ဒါကြောင့် New Page ကိုနှိပ်ပြီးငါ့စာမျက်နှာအသစ် template ကိုသုံးသည်ကိုစစ်ဆေးသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိုလာပြီးဆွဲလိုက်တာနဲ့အဆင်ပြေမယ့် spreadsheet တွေကိုရိုက်ထည့်ပြီးရင် Word ကိုရနိုင်ပြီး New Page ကိုနှိပ်ပါ။ အဲဒီမှာ Not နဲ့ Class မှတ်စုဖိုင်တွေထပ်ထည့်လို့ရတယ်။ class template and me ဆက်၍ သွားကြပါစို့၊ ကျွန်ုပ်ရှေ့ဆက်သွားပြီးတင်းပလိတ်များနှင့်စတိုင်များကိုဖန်တီးချင်သည်ဆိုကြပါစို့။ ငါက PowerPoint ထဲကိုစာမျက်နှာအသစ်တစ်ခုထည့်လိုက်ရင်လမ်းအသစ်တစ်ခုမှာခေါင်းစဉ်မရှိသောစာမျက်နှာတစ်ခုကိုဖန်တီးတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာငါ myclass template ၏မျက်နှာသာပေးမှုကိုဖျက်လိုက်သည်နှင့်တူညီသည်။
၎င်းမှာစာမျက်နှာအသစ်တစ်ခုနှင့်၎င်းကိုကဏ္ page တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောပုံသေအဖြစ်သတ်မှတ်သည့်မှတ်စုတစ်ခုဖန်တီးရန်အကြံဥာဏ်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်၎င်းကဏ္onlyများကိုလုံး ၀ အလွတ်မပေးဘဲအစားဖန်တီးရန်ထိုကဏ္youများကိုသာအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်တည်ဆောက်ထားသောဖွဲ့စည်းပုံကိုပေးပါ။ သင်တန်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုပါက wwlp.com ၌လေ့လာနိုင်ပါသည်
တင်းပလိတ်များကို OneNote တွင်မည်သို့ရှာရမည်နည်း။
ထည့်သွင်းခြင်းOneNote Template ကို
ဖဲကြိုးထဲရှိ Insert tab ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်စာမျက်နှာကိုနှိပ်ပါတင်းပလိတ်များခလုတ်။ မီနူးမှစာမျက်နှာကိုရွေးချယ်ပါတင်းပလိတ်များoption ကို။ မှတင်းပလိတ်များpane ထဲက၏စာရင်းကိုတိုးချဲ့ဖို့အမျိုးအစားကိုကလစ်နှိပ်ပါတင်းပလိတ်များ။မေလ 8 2019
အဘယ်ကြောင့်တင်းပလိတ်များကို OneNote တွင်ရှာမတွေ့သနည်း။
မီနူး tab တွင် Format menu ကိုနှိပ်ပါ။ drop-down menu ကိုပေါ်လာလိမ့်မည်။ From ကိုနှိပ်ပါTemplate..., ပြီးနောက်တင်းပလိတ်များဝင်းဒိုး rightmost ထောင့် popups ပါလိမ့်မယ်။ အသစ်တစ်ခုဖန်တီးရန်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်template ကိုသင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ် Choose default အနေဖြင့်တ ဦး တည်းကိုရွေးပါtemplate ကိုtask pane ။
ကျွန်တော် OneNote ကိုနှစ်အနည်းငယ်ကြာအောင်အသုံးပြုခဲ့တာပါ။ အဓိကအကြောင်းရင်းကပိုပြီးစနစ်တကျဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ မင်းကြည့်ရတာငါလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုဆက်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်။
ငါ့မှာဆောင်းပါးအသစ်တွေအတွက်အကြံဥာဏ်တွေရှိတယ်၊ ငါတစ်ယောက်တည်းပြောခဲ့တဲ့ app အသစ်ရဲ့နာမည်ကိုရေးဖို့လိုတယ်။ ငါကွဲပြားခြားနားသောနေရာများတွင်စုဆောင်းသူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှစည်းညှိတယ်။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာတွင်းနက်ကြီးထဲကိုကျသွားတယ်။
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်သည် OneNote အကြံဥာဏ်များနှင့်လှည့်ကွက်အချို့နှင့်၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုလိုကြောင်းမျှဝေပါမည်။ (မကျေနပ်သောတေးဂီတ) ကျွန်ုပ်တို့မစတင်မှီယနေ့ဆောင်းပါးကိုထောက်ပံ့သောအတွက် Skillshare အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Skillshare သည်သင်ခန်းစာများစွာဖြင့်သင်ယူနိုင်သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုအခါငါနှစ်လအခမဲ့ပရီမီယံဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသောသင်တို့အဘို့အထူး link ကိုရှိသည်။ ၎င်းကိုဤဆောင်းပါး၏ဖော်ပြချက်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်အဆုံးဆီသို့အကြောင်းပိုမိုစကားပြောပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ညှိနေဖို့။
ယခုငါတို့အကြံဥာဏ်များအပေါ်ကိုရွှေ့ကြကုန်အံ့။ Getting Things Done ၏စာရေးဆရာ David Allen ။ စကားမစပ်၊ ကောင်းတဲ့စာအုပ်ပါ၊ သင်စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုကျွန်တော်အရမ်းထောက်ခံပါတယ်။
သူကမင်းမှာအကြံဥာဏ်တွေရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအပြင်ပန်းဒီဇိုင်းစိတ်ကူးတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးသိမ်းဆည်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာဖို့လိုတယ်။ ဒီနေရာက OneNote ငါ့အတွက်ဝင်လာတယ်။
OneNote ဒစ်ဂျစ်တယ်မှတ်စုစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အများကြီးပိုထက်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၏အဆုံး၌ငါနှင့်သဘောတူလိမ့်မည်ဟုငါထင်သည်။ ငါ့ OneNote ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအကြံပေးချက်များကိုသွားကြည့်ရအောင်။
နံပါတ်တစ်၊ သင်ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ရန်အဆင့်ဆင့်ကိုသုံးပါ။ OneNote ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုမှာသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ အဓိကအဆင့်သုံးဆင့်ရှိသည်။ အမြင့်ဆုံးသည်မှတ်စုစာအုပ်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်စုစာအုပ်နည်းတူစာမျက်နှာများစွာပါ ၀ င်နိုင်သည်။
အဲဒါကိုစာအုပ်ထဲရှိအခန်းများကဲ့သို့စဉ်းစားပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့နှစ်ဖက်ရှိပါတယ်။ ဒီထဲမှာသင့်ရဲ့အမှန်တကယ်မှတ်စုများပါရှိသည်။
သင်၏ချက်ပြုတ်နည်းများအားလုံးအတွက်မှတ်စုစာအုပ်တစ်ခုဖန်တီးလိုက်သည်ဆိုပါစို့။ ကျနော်တို့ Right Click နှိပ်ပြီး New Notebook ကိုရွေးနိုင်သည်။ အောက်ကမှတ်စုစာအုပ်ကိုထည့်ပါ။
ဤမှတ်စုစာအုပ်မှကဏ္sectionsများသည်ကွဲပြားနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စတင်သူများအတွက်အပိုင်းတစ်ခုစီကိုအဓိကသင်တန်းများအတွက်တစ်ခု၊ သက်သတ်လွတ်ဟင်းလျာများအတွက်တစ်ခု၊ သင်၌ထိုအကြံဥာဏ်ရှိသည်။ ကဏ္Withinများအတွင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်စာရွက်အတွက်သီးခြားစာမျက်နှာများကိုထည့်ပါ။
ဒီမှာငါတို့မှာရိုင်းဆန်မှိုဘာဂါတစ်မျိုးကိုရွေးချယ်ထားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ ညွှန်ကြားချက်များရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့ပုံများထည့်နိုင်သည်၊ စာရွက်ကိုမည်သည့်နေရာမှရရှိသည်ကိုပင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဒီချက်ပြုတ်နည်းများအပြင်၊ သင့်တိုးတက်မှုအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသောကဏ္withများပါသည့်ဆောင်းပါးများအတွက်အကြံဥာဏ်များအတွက်မှတ်စုစာအုပ်များရှိသည်။
ကျွန်ုပ်သည်စျေးဝယ်စာရင်းများ၊ အားလပ်ရက်များစသည်တို့ကဲ့သို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများအတွက်မှတ်စုစာအုပ်ရှိသေးသည်။ အကယ်၍ အဆင့်ဆင့်အဆင့်ဆင့်လိုအပ်ပါကကဏ္ multiple မျိုးစုံကိုအုပ်စုတစ်စုသို့သင်စုစည်းနိုင်သည်၊ သင်ကဏ္sectionsများကိုအုပ်စုထဲသို့ဆွဲယူနိုင်သည်။ သင်ဖန်တီးနိုင်သောနောက်အလွှာတစ်ခုသည်စာမျက်နှာငယ်များဖြစ်သည်။
၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုရန်သင်သည်ကဏ္ given တစ်ခုတွင်အနည်းဆုံးစာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာရှိရမည်။ ဒီတော့ဒီမှာငါ Excel Conferences မှအစည်းအဝေးမှတ်စုများပါတဲ့စာမျက်နှာရှိတယ်၊ အပိုင်းငယ်တစ်ခုစီအတွက်မှတ်စုများဖြင့်အသက်ငယ်ခွဲများကိုဖန်တီးနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါက Session Notes Excel Conference Bulgaria လို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုစီအတွက်စာမျက်နှာခွဲများရှိသည်။ စာမျက်နှာခွဲများဖန်တီးရန်နှိပ်ပါ။ သင်စာမျက်နှာခွဲတစ်ခုဖွင့်လိုသည့်စာမျက်နှာသို့သွားပြီး Make Subpage Make ကိုရွေးချယ်ပါ။
ဒီခေါင်းစဉ်ကစာသား။ Subpage တစ်ခု၏ Subpage ဟုခေါ်သော subpage အတွက်ကွဲပြားသောအလွှာတစ်ခုသင်ပင်ရနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုမကြာခဏအသုံးပြုလေ့မရှိပါ။ သို့သော်သင်၌မှတ်စုများစွာရှိပြီးအသေးစိတ်ဖွဲ့စည်းပုံလိုအပ်ပါက၎င်းတို့သည်အလွန်အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော်၊ မှတ်စုစာအုပ်၊ အပိုင်းအုပ်စု၊ အပိုင်း၊ စာမျက်နှာ၊ အောက်ခြေ၊ အောက်ခြေ ၂ ။ သင့်အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိသောပုံစံတစ်ခုဖြင့်စတင်ပါ။ ၎င်းကိုသင်အမြဲပြောင်းလဲနိုင်သည်သို့မဟုတ်နောက်မှပေါင်းထည့်နိုင်သည်။
နံပါတ်နှစ်မှာသင်လိုချင်တဲ့အရာကိုရှာရန် tags များကိုသုံးပါ။ အမှတ်အသားများသည်မှတ်စုများကိုခွဲခြားရန်အလွန်ကောင်းသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မှတ်စုများကိုကျွန်ုပ်၏ယေဘုယျဆောင်းပါးစိတ်ကူးများမှတ်စုစာအုပ်တွင်မတူပါ၊ ဤကိစ္စတွင်ပါ ၀ င်သော Query အတွက်ကျွန်ုပ်တွင် M-basics လေ့လာရန်မှတ်စုများရှိသည်။ ဒါကိုကျွန်တော်မကြာခင်လုပ်ဖို့စဉ်းစားချင်တဲ့အရာလို့ဆိုပါစို့။
အပေါ်ကဤမှတ်စု dropdown tag ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်မှတ်စုများသို့မဟုတ်မှတ်စုများ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုထည့်သွင်းဖို့အတွက် default tags အမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်ရွေးနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်မို့မေ့မထားပါနဲ့။ ကျွန်ုပ်၏သုတေသနအတွက်အခြားမှတ်စုစာအုပ်တစ်ခုတွင်ဘားကုတ်စာဖတ်သူအတွက်ဤ app ကိုကြည့်ရှုရန်စာမျက်နှာတစ်ခုကျွန်ုပ်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ဤမှတ်စုအားတူညီသောအညွှန်းနှင့်မှတ်သားနိုင်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်သူတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်ရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်အုပ်စုဖွဲ့နေဆဲဖြစ်ပြီးနောက်မှသင်၏ tag မှတ်စုများကိုရှာရန်လွယ်ကူသည်။
Save for Later ဟုမှတ်သားထားသည့်မှတ်စုများအားလုံးကိုသင်ပြန်လည်ဆန်းစစ်လိုသည်ဆိုပါစို့။ သင်ဒီမှာလုပ်ရန်ဘယ်ဘက်ရှိ search icon ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် search bar ကိုနှိပ်ပြီးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော tags များမှရွေးချယ်ပါ။ သို့မဟုတ်သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာကိုရိုက်ထည့်ပြီးသင်လိုချင်သောနေ့ကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်ဤ tag ပါသောမှတ်စုများအားလုံးစာရင်းကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။
သငျသညျစံ tags များကိုသုံးနိုင်သည်, သို့သော်ငါသည်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင် tags များမှတဆင့်သင့်ကိုယ်ပိုင် tag system ကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ သင်ပြုလုပ်ရန်မှာအောက်ခြေရှိ Create New Tag ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်၎င်းကိုအမည်ပေးပြီးယခင် OneNote ဗားရှင်းများတွင်သင်လုပ်နိုင်သည်ကဲ့သို့သောအမှတ်အသားတစ်ခုကိုရွေးနိုင်သည်။ အသစ်များကိုအောက်တွင်ထည့်သည်၊ ကုန်းကြောင်းမသွားဘဲ Custom tags အရေအတွက်ကိုကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။
ဒါကြောင့်မှတ်စုများကိုခွဲခြားရန် tags များကိုသုံးပါ။ tags အတွက်များစွာသောအသုံးပြုမှုတွေရှိတယ်၊ သင့်လိုအပ်ချက်နဲ့အညီပဲသုံးပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုပါစို့။ သင့်အဖွဲ့ ၀ င်များအားသင်ပေးအပ်ထားသောတာဝန်များကိုခြေရာခံချင်သည်ဆိုပါစို့သို့မဟုတ်သင်၏လေ့လာမှုမှတ်စုများမှအရေးကြီးသောအပိုင်းများကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်အသုံးပြုသည်။
သင်လိုအပ်သည့်အခါသင်လိုအပ်သောအရာကိုရှာဖွေရန်အလွန်လွယ်ကူစေသည်။ နံပါတ် (၃)၊ အကြံဥာဏ်များကိုနေရာတကာတွင် ကပ်၍ မှတ်စုများဖြင့်ရေးချပါ။ ငါထွက်ခွာသွားသောအခါငါစာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်တွင်မမေ့လိုသောအရာများကိုရှာဖွေခဲ့သည်၊ ထို့နောက်သူတို့ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းသို့မဟုတ်ငါအချိန်များစွာကုန်လွန်မိခြင်း၊ ကျွန်ုပ်နောက်ကျောကိုရှာဖွေခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ငါ Sticky မှတ်စုများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Sticky Not's ကိုဖုန်းရှိ OneNote အက်ပလီကေးရှင်းတွင်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ တကယ်လို့တစ်ခုခုကိုမြန်မြန်ရေးချင်ရင် OneNote app ကိုဖွင့်ပြီးအောက်က Sticky Notes ခလုတ်တွေကိုနှိပ်ပြီးစရေးပါ။
ကျွန်ုပ်၏ယခင်စုဆောင်းထားသည့် Sticky Notes များအားလုံးကိုဤနေရာတွင်လည်းရှာတွေ့နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ရုံးသို့ပြန်လာပြီးဤမှတ်စုများကိုကြည့်ရှုလိုသောအခါ Sticky Notes အက်ပ်သို့ကျွန်ုပ်သွားသည်။ ၎င်းသည် ၀ င်းဒိုး ၁၀ တွင်ထည့်သွင်းထားသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုသို့ရောက်ရန်စတင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးစတစ်ကာကပ်ပါ။ ၎င်းသည်ဤတွင်မည်သို့ပေါ်လာသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
၎င်းကိုသင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်ရှိ OneNote အက်ပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုသင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်လက်တော့ပ်ပေါ်၌သီးခြား app တစ်ခုအဖြစ်သင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်ပင်သင်မှတ်စုများကိုသင်နှင့်အမြဲတမ်းရှိနေစေရန်အတွက်သင်အလိုအလျောက်ထပ်တူပြုသည်။ နံပါတ်လေး၊ ရုပ်ပုံများမှစာသားဖြည်ပါ။ နောက်ထပ်ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုမှာ Optical Character Recognition (OCR) ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အားသာချက်နှစ်ခုရှိသည်။ နံပါတ်တစ်တစ်ခုရှိသည်။ သင်သည်ပုံများမှစာသားကိုကူးယူနိုင်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ရန်မလိုပါ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်မှတ်စုများတွင် screenshots များကိုကူးယူခဲ့သည်။ ငါကအပေါ်ကို right click တဲ့အခါငါပုံမှစာသားကိုကူးယူရန် option ကိုရ။ ငါစာမျက်နှာအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးဓာတ်ပုံကနေကူးယူထားတဲ့စာသားကိုကြားနိုင်ပါတယ်။
ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအများကြီးအသုံးပြုတဲ့ဒုတိယအကျိုးကျေးဇူးကတော့စာသားကိုရုပ်ပုံနဲ့ရှာဖွေလို့ရတယ်။ ငါများသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်မှတ်စုရေးသည့်ဆောင်းပါးများမှအချက်အလက်များစွာကိုစုဆောင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဝက်ဘ်ညှပ်နှင့်ဓာတ်ပုံများကိုလည်းပြုလုပ်သည်။ အသေးစိတ်ကိုနောက်မှရှာဖွေသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအသုံးပြုသည်။
အဆိုပါ OCR ပုံသဏ္ဌာန်, display တွေအတွက်စာသားအတွက်လည်းပုံရိပ်တွေအပါအဝင်အားလုံးသက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေမှုပါရှိပါတယ်။ နံပါတ်ငါး၊ Immersive Reader နှင့်အာရုံစူးစိုက်ပါ။ စာသားကိုအာရုံစူးစိုက်ချင်တဲ့အခါ (သို့) စာဖတ်ခြင်းကိုသုံးချင်တဲ့အချိန်မှာငါသုံးချင်တဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ Immersive Reader ။
ယခုအခါ၎င်းသည် Word, Outlook နှင့် OneNote ကဲ့သို့ application များစွာနှင့်ပေါင်းစည်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ စာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်၌ View tab ပေါ်တွင် Immersive Reader ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စေသည်။ စာသားအရွယ်အစားနှင့်အရောင်အခင်းအကျင်းအတွက်ချိန်ညှိချက်များကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်နိုင်သည်။
ဤနေရာတွင်သင်လည်း font ကိုပြောင်းနိုင်သည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာ Comic Sans ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခြေအနေတွင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော်လည်းကလေးများအတွက်အဆင်ပြေသည်။ G-образသည့်ပုံစံသည်ကလေးများကျောင်း၌စာရေးတတ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကလေးများနှင့်စာဖတ်ခြင်းကိုလေ့ကျင့်ရန်ဤအရာကိုလည်းသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါ play ခလုတ်ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပြီးစာသားကိုအသံကျယ်ကျယ်ဖြင့်ဖတ်စေနိုင်သည်။
ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းသည် ၀ င်ငွေပြန်အမ်းငွေကိုတွက်ချက်ခြင်းဖြင့် ၀ ယ်သင့်သည်မဟုတ်သည်ကိုမည်သို့ခွဲခြားရမည်ကိုလေ့လာပါ။ အသံချိန်ညှိချက်များကသင့်အားအသံမြန်နှုန်းကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်အမျိုးသမီးသို့မဟုတ်အထီးအမွဲရွေးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်တော်တို့ Excel template တစ်ခုတည်ဆောက်နေသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်သည် OneNote ကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော်သင်၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ အလွန်အသုံးဝင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်သည်ပုံစံများကိုလက်ဖြင့်ဆွဲနိုင်ပြီးပုံပေါ်တွင်မင်ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ OneNote သည်သူတို့ကိုဖြောင့်သောလိုင်းများဖြင့်ပုံသဏ္shာန်အဖြစ်အလိုအလျောက်ပြောင်းလိမ့်မည်။ သန့်ရှင်းသောထောင့်များသည်လည်းသင်၏အရေးအသားကိုစာရိုက်ထားသောစာများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်အလွန်ကြောက်လန့်သောလက်ရေးရှိသည်။ သတ္တုတွင်းကိုပြောင်းလဲဖို့ပင်စီမံသည်၊ ပထမ ဦး ဆုံးသင်ပြောင်းချင်သောအရာကိုရွေးချယ်ရန် lasso ရွေးချယ်မှုကိုအသုံးပြုပါ။ ထို့နောက် Ink to Text ကိုနှိပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအင်္ဂါရပ်ကိုမကြာခဏအသုံးပြုခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သင်၏မှတ်စုများကိုလက်ဖြင့်ရေးပါ။
သင်္ချာပြevenနာများအတွက် OneNote ကိုသင်သုံးနိုင်သည်။ ညီမျှခြင်းတစ်ခုကိုလက်ဖြင့်ရေးနိုင်သည်၊ ၎င်းကိုရွေးချယ်ရန် lasso ရွေးချယ်မှုကိုသုံးနိုင်သည်။ ထို့နောက် Math ကိုနှိပ်ပါ။ အပေါ်မှ Ink to Math သည်၎င်းကိုရိုက်နှိပ်ထားသောစာသားအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဒါပေမယ့်ဒါကမလုံလောက်သေးပါဘူး၊ သင်တကယ်မေးနိုင်တယ်၊ ရွေးစရာတစ်ခုရွေးပြီးညီမျှခြင်းကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်။ အကယ်၍ သင်စိတ်ဝင်စားပါက stepson ကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုပင်ပြနိုင်သည်။ တော်တော်အေးတယ်ဟုတ်လား သင်၏ဆရာများကိုမပြောပါနှင့်။
OneNote နှင့် OneNote 2016 သို့မဟုတ် OneNote 2016 ကဲ့သို့သောမူကွဲအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သို့သော်တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းကိုယခုအခါ OneNote ဟုသာခေါ်သည်။ ၎င်းကို Windows တွင်ရနိုင်သည်။ Mac Plus အတွက်လည်း၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးသင်၏စက်ပစ္စည်းအားလုံးတွင်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ပိုမိုစနစ်တကျနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းရန် OneNote ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သောနည်းလမ်းအားလုံးရှိသည်။
သင့်တွင်အကြိုက်ဆုံးအင်္ဂါရပ်တစ်ခုရှိပါက၎င်းတို့ကိုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေပါ၊ ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်မဖော်ပြခဲ့သော OneNote နှင့်မျှဝေရန်အသစ်တစ်ခုရှိပါကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်များကိုမျှဝေပါ။ အကယ်၍ မင်းကငါလိုမင်းနဲ့အချိန်နည်းနည်းပိုရချင်တယ်ဆိုရင် Skillshare မှာကုန်ထုတ်စွမ်းအားသင်တန်းကိုတက်ဖို့အကြံပေးလိုတယ်။ Skillshare သည်ထောင်နှင့်ချီသောစိတ် ၀ င်စားစရာသင်တန်းများနှင့်ခေါင်းစဉ်များဖြစ်သောကုန်ထုတ်စွမ်းအား၊ Freelancing၊ ရုံးကျွမ်းကျင်မှုကဲ့သို့သောနည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်အခြားအရာများစသည်တို့ပါဝင်သည်။
Skillshare မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးသင်ခဲ့တဲ့သင်တန်းတစ်ခုကတော့ Simple Productivity, Less and More လုပ်နည်း။ ဒီသင်တန်းကကျွန်မရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မှုစာရင်းကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားစေတယ်။ ငါကအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာငါဘယ်လောက်ပြီးမြောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမဟုတ်ဘဲအရေးကိစ္စတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းအကြောင်းမဟုတ်ဘဲနားလည်သဘောပေါက်လာတယ်။ ဒါကမလွယ်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရာအားလုံးကပထမတစ်ချက်မှာအရေးကြီးတယ်။
ငါ့ကိုကူညီဖို့ဒီသင်တန်းမှာမျှဝေခဲ့တဲ့ကိရိယာတွေကိုကျွန်တော်တကယ်တန်ဖိုးထားတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤသင်တန်းကိုတက်ရောက်လိုပါကသို့မဟုတ် Skillshare ရှိထောင်ပေါင်းများစွာသော c အတန်းတစ်ခုခုကိုသင်စိတ်ဝင်စားလျှင်၊ နှစ်လအခမဲ့ပရီမီယံအသင်း ၀ င်မှုကိုသင့်အားအကန့်အသတ်မရှိရယူနိုင်ရန်အောက်ပါဖော်ပြချက်အကွက်ရှိ link ကိုနှိပ်ပါ။ နှစ်လကြာပြီးနောက်နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းမှုသည်တစ်လလျှင် ၁၀ ဒေါ်လာထက်မနည်းသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များကိုလေ့လာရန်စောင့်ကြည့်ရလွယ်ကူစေသည်။ ဤဆောင်းပါးကသင့်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုတိုးတက်စေရန် OneNote လုပ်နိုင်ပုံကိုအကြံဥာဏ်များပေးခဲ့သည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက၎င်းကိုလက်မလျှော့ပါနှင့် - ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များကိုသင်လိုချင်သည်။ နောက်ဆောင်းပါးမှာမင်းကိုတွေ့မယ်။ (တေးဂီတ)
Mac အတွက် OneNote ရှိစာမျက်နှာတင်းပလိတ်များရှိပါသလား
OneNote for Mac ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည် OneNote အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းတွင် OneNote စာမျက်နှာတင်းပလိတ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ဤတွင်အရင်းအမြစ်င်: https://onenote.uservoice.com/forums/327165-onenote-for-mac/suggestions/6653158-mac-page-templates
OneNote gem menu အတွက်တင်းပလိတ်တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ။
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အသုံးများသောတင်းပလိတ်အချို့ကိုဒီမှာကြည့်ပါ။ Gem Menu add-ins များသည်နောက်ဆက်တွဲတင်းပလိတ်များ၊ Gem Menu အတွက်သုံးတင်းပလိတ်များကိုမပံ့ပိုးပါ။ တင်းပလိတ်များ (ဝဘ်မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်) ကို OneNote ထဲသို့မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။ OneNote ကျောက်မျက်ပုံစံကိုဖန်တီးပါ၊ လက်ရှိတည်းဖြတ်ခြင်းစာမျက်နှာသို့ template ကိုသုံးပါ။ OneNote Template တစ်ခုအတွင်းရှိရက်စွဲများဖန်တီးနည်းနှင့်အသုံးပြုနည်း
အဘယ်သို့ငါ OneNote အားအသစ်သောစာမျက်နှာပေါင်းထည့်သလဲ?
သင်၏သိမ်းဆည်းထားသောစာမျက်နှာ template ပေါ် အခြေခံ၍ လက်ရှိ OneNote ကဏ္ to သို့စာမျက်နှာအသစ်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုပါကညာဘက်ထောင့်ရှိ New Page ဘေးရှိမြှားကို နှိပ်၍ Page Templates ကိုနှိပ်ပါ။ My Templates ကိုနှိပ်ပြီးသင်သိမ်းဆည်းထားသော template ၏အမည်ကိုနှိပ်ပါ။
Microsoft OneNote အတွက်ငွေပေးချေသည့်တင်းပလိတ်များရှိပါသလား။
ပြက္ခဒိန်များ၊ အစီအစဉ်ရေးဆွဲသူများ၊ အားလပ်ရက်စီစဉ်သူ၊ လိပ်စာစာအုပ်၊ လိုင်းပေါ်တာ၊ စီးပွားရေးအစုံ၊ myLIFE၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ / ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အဖွဲ့များနှင့်အခြားအရာများစသည့်ပေးဆောင်ရသော OneNote တင်းပလိတ် ၁၉ ခုကိုလည်းလည်းစာရင်းသွင်းနိုင်သည်။ အသုံးဝင်သောသင်ခန်းစာအချို့ကိုဒီမှာကြည့်ပါ။